Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fahasalamana » Ny zava-mahadomelina Zantrene Cancer vaovao dia miaro ny fo amin'ny fahafatesana
Vaovao Mafampana Aostralianina • Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! • Vaovao momba ny fahasalamana
Ny orinasa Australian biotech sy precision oncology, Race Oncology, dia nanambara ny fikarohana preclinical lehibe izay nahita ny zava-mahadomelina Zantrene® dia afaka miaro ny selan'ny hozatry ny fo amin'ny fahafatesana ary manatsara ny famonoana ny sela homamiadan'ny nono rehefa ampiasaina miaraka amin'ny anthracycline, doxorubicin.
Ny zava-mahadomelina Zantrene an'ny Race Oncology dia hita fa miaro ny selan'ny hozatry ny fo amin'ny fahafatesan'ny chimiothérapie vokatry ny anthracycline. Ny Anthracycline no fanafody miady amin'ny homamiadana be mpampiasa sy mahomby, nefa mety hiteraka fahasimbana lehibe amin'ny fo.
Ny fikarohana préclinical koa dia naneho ny fahaizan'i Zantrene miara-miasa amin'ny anthracyclines efa misy mba hamonoana tsara kokoa ny sela homamiadan'ny nono.
Noho ny maha-zava-dehibe ny fahitana, Zantrene dia halefa haingana any amin'ny toeram-pitsaboana miaraka amin'ny fitsapana Phase 2b nomanina ho an'ny 2022 amin'ireo mararin'ny homamiadan'ny nono izay atahorana ho voan'ny aretim-po vokatry ny anthracycline.
Manolotra ny mety ho fiverenana ara-pitsaboana sy ara-barotra avy amin'ny famolavolana sy fitambarana Zantrene/anthracycline vaovao.
Ity no fotoana voalohany nanehoan'ny zava-mahadomelina ny fahaiza-manao mikendry ny homamiadana ary miaro ny fo amin'ny fahasimban'ny anthracycline. Ity fikarohana ity dia manome fanantenana vaovao ho an'ireo marary homamiadana an-tapitrisany maneran-tany izay manao chimiothérapie miaraka amin'ny anthracycline ary atahorana hanimba ny fony mafy sy maharitra.
Anthracyclines dia fantatra fa ny fitsaboana antikansera mahomby indrindra novolavolaina ary ampiasaina amin'ny karazana homamiadana maro kokoa noho ny karazana anticancer hafa rehetra., anisan'izany ny leokemia, lymphoma, neuroblastoma, voa, aty, vavony, tranonjaza, tiroida, ovarian, sarcomas, tatavia, havokavoka ary kanseran'ny nono. Na izany aza, ny tahotra ny voka-dratsin'ny anthracyclines amin'ny fo dia nahatonga ny oncologista maro hametra ny fampiasana ireo fanafody tena mandaitra ireo. Ny fahitan'i Race dia mety hanova ny fampiasana anthracyclines amin'ny alàlan'ny famelana ireo oncologista hampiasa ireo fanafody mahery ireo amin'ny heriny manohitra ny homamiadana tsy misy tahotra ny fahasimbana maharitra amin'ny fo.
Ny Zantrene® Ny fandaharan'asa fikarohana momba ny fiarovana amin'ny fo dia tarihin'ny mpikaroka momba ny cardiotoxicity malaza, Profesora Associate Aaron Sverdlov sy Doan Ngo, miaraka amin'ny mpahay siansa momba ny homamiadana, Profesora Nikki Verrills, ao amin'ny The University of Newcastle.
Hoy ny Profesora Associate Aaron Sverdlov: “Hatramin'izao, ny foto-kevitra momba ny fitsaboana homamiadana izay tsy vitan'ny hoe tsy cardiotoxic fa, raha ny marina, ny cardio-protection dia tsy mbola nodinihina na nampiala voly, indrindra noho ny 'fomba fitsaboana manokana amin'ny fitsaboana. Ny vokatra azonay dia milaza fa ny Zantrene, fanafody miady amin'ny homamiadana, dia afaka miaro amin'ny voka-dratsin'ny poizina amin'ny fo amin'ny iray amin'ireo fanafody simika ampiasaina matetika indrindra, doxorubicin. Ity no porofo voalohany amin'ny karazany mampiseho fa misy fitsaboana izay sady mikendry homamiadana no miaro ny fo! Izany dia mety hanatsara ny vokatra ara-pahasalamana ho an'ireo marary homamiadana sy ireo tafavoaka velona amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny fitsaboana homamiadana sy ny fisorohana ny fivoaran'ny aretim-po. "
Na dia zava-baovao mampientam-po aza izany, Zantrene® (bisantrene dihydrochloride) dia manana tantara ara-pitsaboana lava, izay novolavolaina tamin'ny taona 1970 ho solon'ny fo azo antoka kokoa amin'ny anthracyclines  alohan'ny fankatoavana any Frantsa tamin'ny taona 1990. Raha voaporofo tamin'ny fitsapana klinika maherin'ny 50 ny fiarovana ny fony Zantrene, , Ny fanontaniana raha afaka manampy amin'ny fisorohana ny fahasimban'ny fo vokatry ny anthracycline ny Zantrene dia tsy voavaha mihitsy.
Naneho hevitra momba ny valin'ny fikarohana vaovao, ny lehiben'ny manamboninahitra siantifika an'ny Race, Dr Daniel Tillett dia nilaza hoe: "Ny fahitana fa ny Zantrene dia afaka miaro ny fo amin'ny chimiothérapie ary mamono ny homamiadana tsara kokoa dia vokatra 'tsara indrindra amin'ny tontolo roa'. Satria ny anthracyclines dia ampiasaina amin'ny mararin'ny homamiadana an-tapitrisany isan-taona, sarotra ny manamafy ny mety ho klinika sy ara-barotra amin'ity fandrosoana ity!"
Amin'ity modely preclinical ity, ny Zantrene dia miaro ny selan'ny hozatry ny fo amin'ny fahasimban'ny doxorubicin ary miara-miasa amin'ny anthracycline mba hamonoana tsara kokoa ny sela homamiadan'ny nono.
Nametraka fangatahana patanty ny Race miresaka ny fitambaran'ny Zantrene miaraka amin'ny anthracycline ho fiarovana ny fon'ny marary. Ity patanty ity (raha ekena) dia hanome fiarovana ny fitambaran'ny fanafody sy ny fampiasana azy amin'ny klinika hatramin'ny taona 2041.
Ity fikarohana vaovao momba ny fiarovana ny fo ity dia handroso haingana mankany amin'ny toeram-pitsaboana. Ny tantaran'ny klinika be dia be an'i Zantrene dia mamela an'io fitambarana io hivoatra haingana amin'ny klinika.
Mandeha ny fifanakalozan-kevitra mandroso miaraka amin'ireo mpitsabo any Aostralia mba hanao fitsapana klinika Phase 2b amin'ireo mararin'ny homamiadan'ny nono izay atahorana ho voan'ny aretim-po vokatry ny anthracycline.
Ity fahitana ity dia manokatra fahafahana tsena vaovao ho an'ny Zantrene manana tanjaky ny klinika sy ara-barotra mitovy amin'ny fahitana teo aloha fa ny Zantrene dia mpikatroka FTO mahery.
Fandinihana biby hatao amin'ny Q4 CY2021/ Q1CY2022.
Fanampiana preclinical fanadihadiana mba hanadihadiana raha ny Zantrene dia afaka miaro ny fo amin'ny fahasimban'ny fanafody chimiotherapeutic hafa izay fantatra ihany koa fa miteraka cardio-damage.
Fanadihadiana fanampiny hamaritana ny mekanika molekiola amin'ny hetsika cardio-protection an'i Zantrene. Izany dia ahafahana mamantatra ireo asa fiarovana fanampiny an'ny Zantrene.
Famolavolana fandrafetana fitambarana fanafody vaovao sy tsara indrindra miaraka amin'ny sanda ara-pahasalamana sy ara-barotra nohatsaraina.
Fanombohana ny fitsapana klinika momba ny homamiadan'ny nono dingana 2b tamin'ny 2022.